ALATSINAINY 26 OKTOBRA 2020
FEPETRAN’NY FIFIDIANANA : Teboka maro no nasian’ ny Ceni fanovana
Maro ny fanovana naroson’ny Ceni ho entina hanatsarana ny fiatrehan’ny firenena ny fifidianana amin’ny ho avy. 24 septembre 2020
Anisany voakasika ao anatin’izany ny fanaovan’ireo Kandidà fampielezan-kevitra izay miteraka adihevitra hatrany isaky ny fifidianana, ankoatr’izay ihany koa ny mahakasika ilay vola fampandraisan’anjaran’ireo Kandidà.
Niatrika fivoriana ireo mpikambana eo anivon’ny vaomieram-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana (Ceni) nanomboka omaly. Fivoriana izay hiarahana amin’ireo antoko politika sy ireo kandidà efa niatrika fifidianana, ireo fiaraha-monim-pirenena izay nandray anjara tamin’ny fanaraha-maso ny fifidianana, ny mpiara-miombon’antoka rehetra ary ireo sokajin’olona samihafa izay niara-nisalahy tamin’ny fanatanterahana ny fifidianana hatramin’izay. Izy ireo izay miara-mikaon-doha mitady ny hevitra mba hanatsarana ny fifidianana amin’ny ho avy.
Teboka maro no nitondran’ny Ceni fanavaozana niainga tamin’ny tolo-kevitra nomen’iretsy farany izay naravona anaty antota-kevitra iray ka ho atolotra izay rafitra mahefa afaka mampanankery izany. « Ny fanavaozana izay atolotry ny Ceni dia miainga avy amin’ireo tolo-kevitra avy amin’ireo mpiara-miombon’antoka. Izy ireo ny naravon’ny Ceni ka natolotry ny Ceni any amin’ilay rafitra izay mahefa eo amin’ny fampanjariana ny lalàna », hoy ny fanazavana noentin’ny mpampaka-tenin’ny Ceni. Isan’ireo nitondrana fanatsarana ny mahakasika ny fampielezan-kevitra izay miteraka olana hatrany isaky ny fifidianana. « Amin’ny ankapobeny, anisany voalaza ao ny mahakasika ny fampielezan-kevitra.
Tolo-kevitra nomen’ny Ceni hoe, rehefa hiatrika fifidianana dia any amin’ny herintaona mialohan’ny volana izay hanatanterahana ny fifidianana dia misy ilay vanim-potoana sava ranonando na « preliminaire » ka ao no manomboka ny fahafahan’ny Kandidà sy ny mpanohana azy miomana tsy mbola fampielezan-kevitra io akory fa ny fiomanana. Raha vao mivoaka ny lisitra ofisialin’ireo Kandidà dia manomboka eo ny fampielezan-kevitra », hoy ny fanazavana. Ankoatr’izay dia nasiam-panitsiana ihany koa ny mahakasika ilay vola fandraisan’anjaran’ireo kandidà. Hatramin’izay dia tsy miverina amin’ireo Kandidà izany raha tsy mahazo 10% amin’ny vato manan-kery izy, izay novain’ny Ceni fa raha mahazo 5% ilay Kandidà dia miverina aminy io fandraisan’anjarany iny.
« Ny vola fampandraisana anjara an’ireo kandidà amin’ny fanotana ny biletà tokana. Rehefa nampitaha ny Ceni ny amin’ireo firenena hafa dia hita fa somary ambony ilay taha hoe, ny 10%n’ny vato manan-kery no tsy maintsy azon’ny Kandidà izay vao averina aminy ilay vola fandraisana anjara dia nandroso hevitra ny Ceni hoe, rehefa mahazo ny 5% ny Kandidà dia averina aminy ilay caution ary hamoraina ny pitsopitsony amin’ny famerenana ireny volan’ny Kandidà ireny », hoy hatrany ny fanazavana.
Miriaria eran’ny tanàna sahady ireo lehilahy nahavanon-doza FANAFIHANA MPIVADY TANY BETSIAKA -AMBILOBE (346) 22 octobre 2020 Olona 04 naratra, vola 2 tapitrisa ariary lasan’ireo jiolahy miisa enina AMBILOBE (116) 21 octobre 2020 Tovolahy nisandoka ho mpitandro filaminana sarona ny alarobia teo ANKAZOMANGA (103) 22 octobre 2020 Sarona ireo 12 lahy mpampihorohoro sy mpanao fanafihana IMERINTSIATOSIKA (93) 21 octobre 2020 Nahanjahanjan’ny vahoaka irery ireo parlemantera mpanohitra AMBATONDRAZAKA (83) 26 octobre 2020 Lehilahy tompona “Agence de voyage” nadoboka am-ponja FIVADIHAM-PITOKISANA (65) 22 octobre 2020